Hanomboka ny famokarana chip nanometra 10 ny TSMC amin'ity taona ity | Vaovao IPhone
TSMC hanombohana famokarana betsaka ny chip nanomet folo amin'ny faran'ny taona
TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited), orinasa miasa miaraka amin'i Apple ary namolavola ny chip A10 Fusion izay manome fahefana ny iPhone 7, dia nanamafy ny famokarana betsaka ny chip nanometer folo hanombohan'ny mpanjifany amin'ny faran'ny taona, mandresy Intel amin'ny resaka fitaovana silikone avo lenta.
Hanomboka ny famokarana ireo chip 2017-nanometer amin'ny antsasaky ny taona XNUMX ny Intel.
Raha niresaka tamina lahateny ara-teknolojia tao amin'ny tanàna avaratr'i Hsinchu, Taiwanese, ny talen'ny TSMC, Marcos Liu, dia nilaza fa vao manomboka ny orinasany, miaraka amin'ny drafitry ny fikarohana sy ny fampandrosoana (R&D), miasa amin'ny teknolojia fanapahana farany mba hamoronana chip dimy refy.
Ny fitrandrahana semiconductor dia hanomboka ihany koa amin'ny famokarana andrana ireo fito-nanometatra chip amin'ny habetsaka kely amin'ny telovolana voalohany 2017. Ny asa amin'ny fantsom-panakanana dimy-nanometer dia natomboka ary nanendry injeniera manodidina ny 300 ka hatramin'ny 400 hamorona teknolojia telo-nanometera.
Ankoatra izany, TSMC dia manadihady ny fizotran'ny nanometera roa.
Ny teti-bola R&D an'ny TSMC dia nitombo betsaka tamin'ny $ 690 tapitrisa tamin'ny 2009 ka hatramin'ny $ 2,1 miliara tamin'ny taona 2015. Ho an'ny taona feno 2016, 10 miliara dolara natokana ho an'ny fandaniam-bola.
Ny TSMC dia nanangana ny puce A9 miaraka amin'i Samsung ary mamokatra manokana fotsiny ny chip A10 Fusion farany ho an'ny iPhone 7 amin'ny fizotrany 16 nanometatra. Ny orinasa ihany koa dia honohono fa nahazo fifanarahana hananganana ny chips A11 amin'ny 2017. ho an'ny taranaka vaovao iPhone.
Inoana koa fa i Apple dia mety hanomboka hanolo ireo chips Intel ao amin'ny MacBook miaraka amin'ny teknolojia TSMC amin'ny taona ho avy, amin'ny fomba miadana toa ny efa natao tamin'ny iPhone sy iPad.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » TSMC hanombohana famokarana betsaka ny chip nanomet folo amin'ny faran'ny taona
amboary ny lohateny… ..
Alejandro Cabrera dia hoy izy:
Novaina, misaotra Miguel.
Valiny tamin'i Alejandro Cabrera
Twitch Prime, ny fampahalalana rehetra momba ny serivisy vaovao
iDisplay amin'ny tolotra miaraka amin'ny fihenam-bidy 50%